मलेसियामा नेपाली दलालको हातमा लाचार कामदार, घर फर्किन पनि यस्तो गर्नु पर्ने ! - jagritikhabar.com
मलेसियामा नेपाली दलालको हातमा लाचार कामदार, घर फर्किन पनि यस्तो गर्नु पर्ने !
केसीले आफूले दु:ख पाएका नेपालीको सेवा गरेर र खानेबस्ने तथा यातायात सहितको सबै शुल्क जोडेर त्यति रकम लिएको हिसाब सुनाए । उनले कतिपय अनधिकृत एजेन्टले कामदारसँग चार हजार रिंगिटसम्म असुलेको उल्लेख गर्दै भने, ‘म त कामदारलाई सेवा शुल्कको रसिद नै दिन्छु । तर धेरैजसो एजेन्टले घर पठाउने नाममा चर्को शुल्क असुुल्छन् र यातना दिएर पनि ठग्छन् ।